Documentaire AKIMA (Association des kinésithérapeutes de Madagascar) - Madagascar Informations
Documentaire AKIMA (Association des kinésithérapeutes de Madagascar)
3 avril 2017 3 avril 2017 Madagascar Informations Aucun commentaire
AKIMA : Association des kinésithérapeutes de Madagascar
Ny taona 2008 no niorina ny fikambanany ivondronan’ireo kinesitherapeute eto Madagasikara na ny AKIMA izay nanaraka fiofanana teo anivony ivon-toeram-pampiofanana IFIRP eto Antananarivo.
230 amin’izao fotoana izao ireo mpikambana ka ny 70% amin’ireo dia miasa eo anivony toera-pitsaboana miankina amin’ny fanjakana avokoa.
Tsy mbola ampy io taha io raha ho an-tsika eto Madagasikara satria kinesitherapeute 1 ho an’ny olona 1 hetsy no misy eto raha toa ka 1 ho an’ny olona 900 No manaraka ny fenitra iraisam-pirenena.
Marihina fa ny IFIRP ihany aloha hatreto no ivon-toeram-pampiofanana paramedikaly mampiofana ho kinesitherapeute eto Madagasikara izay tantanany fanjakana. Antom-pijoroany Akima ny hampiroborobo sy hampandroso ny asany kine izay tohanany vondrona Eropeana.
Aminy alalany hetsika avokoa no fitsaboana fototra, noho izany azo hatao tsara ny misoroka ny aretina mialoha toy ireo olona ahiana ho tratrany fiakarany tosidra sy ireo voany diabeta izay afaka raisiny sampan-draharaha madikaly eo anivony Akima an-tanana ny fikarakarana azy, saingy marihina fa tsy maintsy misy ny taratasy avy any aminy dokotera na ny prescription medicale. Sehatra voalohany anisany hiasany kine manokana ny aretiny fo sy ny lalan-dra ka hamerenana ireo marary eny anivony fiaraha monina fa indrindra raha namela takaitra ilay aretina.
Ilaina dia ilaina arak’izany ny fanaovana fampiasam-batana mba ahafahana misoroka aretina maro , miampy ny fampahafantarana ireo fomba sy fihetsika mety ho an’ny fahasalamana.
Mifameno ny asany mpitsabo sy ny kinesitherapeute samy mandray an-tanana ny fitsaboana ,ohatra amin’izany ny famerenan’ ny kine ny fitadidiany marary miampy ny fanetsiketsehana ireo ratsam-batana ao anatiny enimbolana voalohany.
← 20 septambra ny Taom-baovao Malagasy ny Zanadranavalona
Nitondra ny anjara birikiny ny FIMPIFIMA →
Les États-Unis appuient Madagascar pour éradiquer définitivement le paludisme
Dr Fidy Bariniaina manazava ny Homamiadan’ny nono